Matagi: twitter analytics | Martech Zone
TweetReach: Ndeipi Yakakura Iyo Yako Tweet Kufamba?
Svondo, Gunyana 27, 2015 Svondo, Gunyana 27, 2015 Douglas Karr
Wati wamboda kuziva nezvekuti Tweet yakabvisa sei pa Twitter, ndiani akaitazve zvakare iyo yaifambisa kutarisisa, uye ndeapi mamwe maakaundi akaita nayo? Ndiwo waive mubvunzo chaiwo wandaibvunza munguva pfupi yadarika neiyo chaiyo peji iyo yakawana kutarisisa kwakawanda. Ndichishandisa TweetReach, ini ndakanamatira muURL yandaishuvira kuona nhoroondo yacho uye ndikagamuchira mushumo wakazara pane iyo dura reTwitter. Uchishandisa
RivalIQ chinjiso-chiteshi ongororo chishandiso chinopa kukwikwidza kuongorora pane dzekutsvaga injini uye zvemagariro midhiya, zviyeuchidzo, kiyi yezwi uye chinzvimbo data, uye kufurira kuferefeta. RivalIQ inopa inotevera injini yekutsvaga uye zvemagariro midhiya kuongorora kwevatengesi veadhijitari: Twitter Analytics - iyo data reTwitter iwe yaunoda - nedata rekuita pane yega Tweet mune yako nzvimbo. Uyezve, iwe unowana kutaurwa kwekutevera kwenzvimbo yako yese. Facebook Analytics - tevera ese positi - uye makwikwi acho,
Tellagence: Zvekushambadzira Zvemagariro
NeChishanu, Gumiguru 19, 2012 NeChishanu, Gumiguru 19, 2012 Douglas Karr
Vatengesi vanowanzo bata nhepfenyuro yezvemagariro sezvavanogona kuita mamwe enhau enhau Tsvaga paane mabhora eziso mazhinji uye uvadzinge. Musiyano wacho wakakura, zvakadaro. Mukati memasocial network, pane zviitiko zvitatu: Kutarisa - vateereri vanongotevera nekutora ruzivo rwekushandisa kwavo pachavo. Kudyidzana - nharaunda inopindura uye inopa mhinduro kune iyo ruzivo rwunogoverwa. Kukwidziridzwa - vanhu vari mukati mevateereri kana nharaunda vanogovana ruzivo